ပျော်ရွှင်ခြင်းသာသယ်ခဲ့ပါ | U.N.O.B
via Nine Nine SaNay by နိုင်းနိုင်းစနေ on 2/8/10
မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့အိမ်ကို အလည်အပတ်သွားခဲ့တုန်းက ဓာတ်လှေကားကထွက်တာနဲ့ သူတို့အိမ်ပေါက်ဝမှာ ဆိုင်းပုဒ်တစ်ခု ချိတ်ထားတာကို တွေ့လိုက်တယ်။ ဆိုင်းပုဒ်ပေါ်မှာက “အိမ်ထဲမဝင်ခင် ကျေးဇူးပြုပြီး စိတ်ညစ်စရာတွေကို အပြင်မှာချွတ်ခဲ့ပါ။ အိမ်ပြန်ချိန် ပျော်ရွှင်ခြင်းသာသယ်ခဲ့ပါ” လို့ရေးထားတယ်။
အဲဒီဆိုင်းပုဒ်အကြောင်း အိမ်ရှင်မကို ကျွန်တော်မေးတော့ သူက အိမ်ရှင်ယောက်ျားကို ပြုံးပြုံးရယ်ရယ်နဲ့ကြည့်ပြီး “ရှင်ပဲပြောလိုက်ပါ..” လို့ပြောတယ်။
အိမ်ရှင်ယောက်ျားကလဲ ညင်ညင်သာသာနဲ့ “ခင်ပဲပြောလိုက်ပါ.. ဒါ ခင် ဆန်းသစ်ထားတာလေ” လို့ပြောတယ်။
နောက်ဆုံး အိမ်ရှင်မက သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ ” တစ်ခါက ကျွန်မအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန် ဓာတ်လှေကားက မှန်ထဲမှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး သုန်မှုန်နေတဲ့ ကိုယ်ပုံရိပ်ကိုသွားတွေ့မိတယ်။ မှန်ထဲက မျက်ခုံးနှစ်ခုထိလုမတတ် မျက်မှောင်ကျုံ့ပြီး စိတ်ပျက်နေတဲ့ ကိုယ့်မျက်လုံးတစ်စုံကို တွေ့မိတော့ ကျွန်မလန့်သွားခဲ့တယ်”
“ဒါနဲ့ ကိုယ်တောင်လန့်တဲ့ကိုယ့်ပုံစံကို အိမ်က ကလေးနဲ့ ခင်ပွန်းတွေ့တဲ့အချိန် ဘယ်လိုခံစားရမလဲလို့ ကျွန်မစဉ်းစားမိတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့ရဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကို ကျွန်မတွေ့ရင်ကော ဘယ်လိုခံစားရမလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးမိတယ်။ တစ်ဆက်တည်း ထမင်းစားပွဲပေါ်က ကလေးတွေရဲ့ ဆိတ်ငြိမ်တာတွေ၊ လင်ယောက်ျားရဲ့ အေးတိအေးစက် အမှုအရာတွေကို သွားမြင်ယောင်မိတယ်…. ”
“ဒါနဲ့ နောက်တစ်ရက်မှာ ကိုယ့်ကိုအသိပေးတဲ့အနေနဲ့ ဒီလိုဆိုင်းပုဒ်လေးရေးပြီး အိမ်ရှေ့တံခါးဝမှာ ချိတ်ဆွဲထားလိုက်တယ်။ ဒီလိုချိတ်ဆွဲပြီးနောက် ဒီလိုဆိုင်းပုဒ်က ကိုယ့်ကိုအသိပေးရုံမက မိသားစုအားလုံးကိုလည်း အသိပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်။ ပိုထူးဆန်းတာက ကျွန်မတို့မိသားစုတင်မက ကျွန်မတို့အိမ်ကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေပါ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဖြစ်သွားကြတယ်” လို့ပြောပြတယ်။
“အိမ်ထဲမဝင်ခင် ကျေးဇူးပြုပြီး စိတ်ညစ်စရာတွေကို အပြင်မှာချွတ်ခဲ့ပါ။ အိမ်ပြန်ချိန် ပျော်ရွှင်ခြင်းသာ သယ်ခဲ့ပါ”
မူရင်းရေးသားသူ– Yang Zhigang (楊志剛) or 帶快樂回家
Than Naing April 11, 2011 at 5:32 pm Reply
bm February 27, 2010 at 1:33 am Reply
Very good artical. Love it. Thanks.